Kuzohlonishwa uNkunzi Magudulela ngezimpi zeWBF
February 7, 2022 February 7, 2022 Impempe.com
UZwilenkosi Magudulela uthembisa isibhakela esiqhwiza umentshisi ezimpini zokuhlonipha uyise uThulani “Nkunzi” Magudulela ongasekho emhlabeni.
UMagudulela uthathwa njengobaba wesibhakela KwaZulu-Natal njengoba enza omuhle umsebenzi ukuvusa lo mdlalo kulesi sifundazwe ngaphambi kokushona kwakhe.
UZwi udlane indlebe neMpempe wathi amalungiselelo ahamba kahle kakhulu waphinde waveza ukuthi ngalezi zimpi bafuna zibe sezingeni lezi zimpi zokukhumbula uNkunzi owadlula emhlabeni ngonyaka odlule ngenxa yeCovid-19.
“Kuzokhumbuleka ukuthi wathi esaphila ubaba wathi ufuna ukuvundulula amakhono kuso sonke isifunda seZululand.
“Wathi ufuna ukukhiqiza ompetha khona. Njengoba indlela ayikhomba nje, ngizoqhubeka lapho egcine khona namanje ngiqinisekile ukuthi ngihamba phezulu kwezinyathelo zikababa noma ngingeke ngalingana naye,” kushi uZwi.
Lezi zimpi ziholwa ngeyebhande leWBF elizolwelwa nguKhumbulani Flint Mdletshe waseMpangeni noLybon Ntshani waseLimpompo kanti zizoba ngoFebhuwari 19 KwaNongoma Hall.
UNtshani uphekwa nguVusi Mtolo nowaziwa kakhulu njengoba engaphansi kwesitebela sikaNick “Mthakathi” Durandt ongasekho.
FUNDA NALA: URulani ubona ubungozi kwiChippa ezobhekana neSundowns koweligi
Le mpi ibhekwe ngabomvu kanti uZwelonkosi uzoba eqala ukuhlela izimpi kusukela kwadlula uyise kwabe sekuba nguye othatha isikundla sakhe kwiLudonga Boxing Promotions.
“Ngicela ukukhuliswa kahle ngoba akhona amaphutha engizowenza njengoba inkonyane isathuka isisinga nje.
“Ngisathembele kakhulu kulokho engakuncela kubaba. Njengamanje kumele ngihambe indlela yami futhi manje sengihamba ngedwa.
“Nginethemba ngoba abantu ebekade besebenza nobaba bakhona bonke, sizokhumbuzana lapho ngingazi khona,” kuphetha uZwi.
Previous Previous post: URulani ubona ubungozi kwiChippa, kodwa uthi bengabuvika
Next Next post: Sekucacile ngeDStv Premiership, iSundowns imuka nayo